Quubsuma koo 4: 'Biyyi ambaa biyyuma ambaati' - BBC News Afaan Oromoo
Quubsuma koo 4: 'Biyyi ambaa biyyuma ambaati'
Goodayyaa suuraa Mooraan baqataa Kaakumaa gamoojjii kaaba Keenyaaa kessatti argama
'Baqatanii biyyaa bahuun lubbuu oolfachuuf yoo nama gargaareyyuu, haalli jireenya biyya ambaa yoomiyyuu nama qoruunsaa gaaffii hin qabu.'
Dureessoo Moosiisaan jedhama. Biyya Keenyaa Kaawuntii Turkaanaa keessatti kan argamu Kaampii baqattootaa Kaakumaa jedhamu keessan jiraadha.
Kaampii kana keessa namoota biyyoota gara garaa irraa baqatanii dhufan 200,000 ol ta'antu jiraata.
Kaakumaa keessa jiraachuun baay'ee ulfaataa dha. Gammoojjummaan isaa giddugaleessaan hanga digirii seentigireedii 39 gaha.
Busaa dabalatee dhukkuba adda addaatu jira. Torbaan-qabaa fi bofi gosa hedduutu keessatti argama. Yeroo tokko tokko namootni bineeyyii kanneenin ni hiddamu, kanneen du'anis ni jiru.
Garana kanan dhufe baqadheeni. ABO deeggarta jedhamee waggaa 8'f mana hidhaa kessatti ergan gidirfamaa turee booda gad dhiifamus, hordooffii narraa dhaabuu didnaan, lubbukoof sodaadheen biyya koo gad dhiisee bahe.
Biyyaa yeroon bahe kallatiidhaan biyyuma Keenyaa kanattan baqadhe. Ergan dhufee waggaa 11 guutuu mooraa baqataa Kaakumaa kana keessan jiraadha.
Dararamni hin jiru malee, mirga akka garaa koo olii gadi deemu dhabuun kiyya, mana hidhaa akkan jirutti akkan yaadu na taasisa.
Kaakumaan gandoota baay'ee qaba. Kaakumaa 1, 2, 3... jechuun beekamu. An kanan jiraadhu Kaakumaa tokko keessatti.
Haawaasa Oromoo fi kan Itoophiyaa irraa dhufanitu baay'inaan keessa jiraata. Warra kaan caalaa xiqqoo mukkeen qaba. Namoota nu dura turantu dhaabe.
Anis namoonni biroonis hanga dandeenyetti bishaan dhugaatii nuuf raabsamu irraa qusachuun muka guddisuuf hanga tokko carraaqaa jirra.
Goodayyaa suuraa Mooraa baqataa kaakumaa keessa namoota lammi Itoopiyaa baay'eetu jiraata
Wantota biyya koo akkan yaadu na godhan keessaa inni guddaan maatii koo irraa adda bahuu kooti.
Dararamni hin jiru malee, mirga akka garaa koo olii gadi deemuu dhabuun kiyya mana hidhaa akkan jirutti akkan yaadu na taasisa.
Waggaa sadii dura mucaa durbaa argachuun koo, waan gaarii mooraa kaakumaa kana keessatti naa ta'e jedhee himadhuu keessaa isa hangafaati.
Ergasii jireenyi koo baay'ee geeddarame, yeroon ishee argu gamachuutu natti dhagahama. Dhippuu fi rakkina hundumaa na hiraanfachifteetti.
JRS kan jedhamu dhaaba tola ooltumma keessatti carraa argadhee hojii xiqqoo hojjechuun mucaa koo guddifachuu na dandeessisuu irra darbee, leenjiin adda adda argadhu gara fulduraatti illee waan na gargaaruuf nan gammada.
Biyya kana keessatti nyaata gosa addaa addaa nyaachuu bareera, isaan keessaa kanan jaaladhu garuu Ugaalii isa jedhamudha. Ugaaliin nyaata marqaa kan fakkaattufi boqollorraa kan hojjetamudha. Ugaalii raafuun nyaachuutu natti tola.
Utuun aboo addaa tokko qabaadhee mooraa baqataaf qofa utuu hin ta'iin, naannoo Kaakumaa hundaaf gubiinsa qilleensaa fi gogiinsa lafa kanaan gara qabbanaa fi magariisaatti jijjiira.
Ammoo humni asii na butee Oromiyaa na buusu osoo jiraatee, bakka dhaloota koo magaalaa Amboo, matii koo kessattan of arguu barbaada.
''Haga Moyyalee keessa alaabaan lama ejje, nagaan dhufuu hin danda’u''